03/17,2014 Sokajy Eritreritra mandalo
Betsaka tokoa ankehitriny no mandiso an'ireo teny ireo. Ny antony, ny fahitako azy, dia mety ny nanoratra azy voaloha (ny misionera angamba) no tsy nahita fomba anoratana azy tsara. Ka nony taty aoriana dia noraisin'ny olona nianatra ho marina ilay izy ka niova hatramin'ny tompo-teny.
Ny tena marina angamba dia ambo sy amba no tokony ho izy. Ary ny ny dia mpanoritra na antsoin'ny frantsay hoe "article".
Ohatra: eo ambony hazo. Mety tsara izao io raha tenenina, na soratana aza. Nefa raha dinihina ny lafin'ny fitsipi-pitenenana nifanarahana, dia tokony hoe eo ambon'ny hazo. Ny n voaloha dia fanatsaram-peo izay tsy tokony ho eo akory raha ny tena feo no henoina.
Fa lasa niova ilay izy ka lasa ambony no fiteny ka lasa eo ambonin'ny hazo no lasa fahazaran-dratsy.
Tsy dia sarotra ny fahitako azy ny miverina amin'ny tena marina: any ambany tany fa tsy any ambanin'ny tany. Fa ny hitako mampiambakavaka dia ilay rehefa hampiasa ny mpanondro ilay.
Ohatra: eo amban'ilay hazo fa tsy eo ambanin'ilay hazo
Eny e, azo kotranina kely ihany.
07/24,2013 Sokajy Eritreritra mandalo
Hiverina hitoraka blao ndray
Nandritra izay fotoana tsy nanoratako blaogy izay, ohatran'ny vao omaly, dia zavatra maro dia maro tokoa no hitako. Azo atao hoe efa gramme amin'izay aho izao. Tena koboko fa na miezaka tahaka ny inona aza ianao dia misy foana zavatra tsy hainao. Indraindray aza dia tahaka ny tsy mahay na inona na inona.
Na izany aza tsy nisy nahay tany ankibon-dreniny ka tsy koah fa vao maika aza mandrisika anao handroso amin'ny lalina akoho akoho.
Tsy dia hikivalavala intsony aho anefa amin'ity blaogy ity fa mba matotra kely amin'izay. Resaka fampianarana no alefako eto.
Ity aloha misy youtube kely na izany aza.
10/13,2012 Sokajy Eritreritra mandalo